IXESHA LAKHE LEZINTO EZIMNYAMA EZI-2: AMARHE MALUNGA NOMHLA WOMOYA WAWO KUNYE NEETHIYORI EZINTSHA, IINDABA EZIZAYO, AMATHUBA, UHLAZIYO LWAMVA NJE, KUNYE NEPLOTI OMELE UYAZI - IINKQUBO ZETV
Ukuzonwabisa okumnandi kwinoveli kaPhilip Pullman enegama elifanayo. Izinto zakhe eziMnyama luthotho lweTV oluveliswe ngokubi
Ukuzonwabisa okumnandi kwinoveli kaPhilip Pullman enegama elifanayo. Izinto zakhe eziMnyama luthotho lweTV oluveliswe nguBad Wolf (BBC One) kunye nemveliso yeNewline (HBO). Ixesha lokuqala lezinto zakhe eziMnyama zilandela ibali lowasetyhini onesibindi ogama linguLayra osokolayo ukukhulula umhlaba wakhe kwiMagesterium.
Ewe, ukulinda ngoku kugqityiwe. Inqanaba ngoku lisetelwe ixesha lesibini eliza kukhutshwa kwiinyanga ezizayo. Ewe ulungile. Ngolwazi oluthe kratya kwixesha lesibini lezixhobo zakhe zobumnyama, qhubeka ufunda.
Umhla wokukhutshwa kunye nenqwelomoya yeXesha lesi 2
Ixesha lokuqala eliboniswe kunyaka ophelileyo nge-3 ka-Novemba ngo-2019 kwi-BBC enye e-UK. Ineziqendu ezisibhozo zizonke. Nokuba ngaphambi kwenkulumbuso yexesha lokuqala, abenzi bahlaziye umboniso okwesibini. Nangona kungekho zibhengezo zaseburhulumenteni malunga nomhla wokukhutshwa kwexesha lesibini, silindele ukuba ikhutshwe ukuphela kwe-2020.
Ngelixa unokufumana iividiyo ezininzi ezinxulumene ne- Ixesha lesibini le Izinto zakhe ezimnyama , Akukho nanye kuzo elayishwa ngokusemthethweni. Kodwa silindele enye kungekudala. Ngokwezibuyekezo zakutshanje, i-HBO ibhengeze ukuba ixesha lesibini liza kuqala ngoNovemba, elingabonakali kude kakhulu.
Silindele ukuba izikhokelo zibuyele. Ezona ndaba zimnandi zokongezwa kwamalungu amatsha aza kukhutshwa Izinto zakhe eziMnyama Ixesha lesibini liya kuba yindima kaMary Malone. Amalungu abuyileyo ngokuqinisekileyo abuyayo nguDafne Keen odlala uLyra Belacqua, uRuth Wilson odlala uMarisa Coulter, uClarke Peters odlala iMaster, uJames Cosmo odlala uFarder Coram, uAriyon Bakare odlala uNkosi Boreal, uJames McAvoy odlala uNkosi Asriel noLin-Manuel Miranda njengoLee Amanqaku.
Isiza: Yintoni onokuyilindela kwiXesha lesi-2 lezinto zakhe eziMnyama
Ukusukela ixesha elinye lalisekwe kuqala kukaPhillip Pullman Izinto zakhe eziMnyama trilogy. Imithombo icebisa ukuba Ixesha lesibini lomboniso iya kulungelelanisa incwadi yesibini kaPullman ebizwa ngokuba Imela efihlakeleyo. Akukho bubi xa usithi uninzi lwebali lamabali liza kuthathwa kwimixholo yentsomi ebhalwe nguPhillip Pullman kwincwadi yakhe. Ngelixa kunokwenzeka ukubandakanya ezinye iinguqu ukusinika inxenye yethu yokujika kunye nokujika.
Okwangoku, silindele ukuba umboniso uzakubonisa uParry ojoyina uLyra eCittàgazze, abo babini ababandakanyekayo kwihlabathi labo, kwaye bebonke kunye.
I-peaky blinders ixesha le-6 iphambili
Siza kunigcina nonke ngeposi kunye nohlaziyo lwamva nje lwezixhobo zakhe zobumnyama.
indlu yamakhadi isizini entsha
Ixesha lejack ryan 3 amazon prime
ubukele nini iimuvi ze-dbz
phakathi kwexesha 3 lokukhutshwa komhla
ikhawuleza kwaye inomsindo 9 kwi-netflix